नर्भिकमा बिरामी नहेरी मेडिकल रिपोर्ट
रिपोर्टबिहिवार, फाल्गुण १७, २०७४
श्रीजंग र रुद्रकुमारी शाह । अहिले उनीहरू दानवीर दम्पतीको रूपमा चर्चित र प्रशंसित छन् । शाह दम्पतीले काठमाडौंको कान्तिपथमा रहेको रु.१ अर्बभन्दा बढी पर्ने दुईतले घर र तीन रोपनी तीन आना जग्गा नेपालगन्जको फत्ते बाल आँखा अस्पताललाई दान दिएका छन् ।
नेपालगन्जका ९३ वर्षीय श्रीजंग शाह ३० वर्षदेखि फत्ते बाल आँखा अस्पतालका संरक्षक पनि हुन् । उनका बुवाआमा यो अस्पतालका संस्थापक थिए । काठमाडौंमा रहेको आफ्नो जेथा ९० वर्षीया पत्नी रुद्रकुमारीको सहमतिमा अस्पताललाई दान दिएको शाह बताउँछन् । त्यसअनुसार, शाह दम्पतीको शेषपछि उक्त घरजग्गा अस्पतालले भोगचलन गर्नेछ ।
मेडिकल रिपोर्टको खेल
यसरी समाजसेवामा अग्रसर शाह दम्पतीमाथि ‘मानसिक स्वास्थ्य समस्या’ भएको आरोप लाग्यो, त्यो पनि आफ्नै एक्ली छोरीबाट । थापाथलीको नर्भिक अस्पतालका डा. पंकज जालान र डा. यादव भट्टले त्यो ‘आरोप’ प्रमाणित गर्न सहयोग गरे । डा. जालानले रुद्रकुमारी र डा. भट्टले श्रीजंग शाहलाई डिमेन्सिया रोग लागेको मेडिकल रिपोर्ट जारी गरे, त्यो पनि बिरामी हेर्दै नहेरी ।
कन्सल्ट्यान्ट न्यूरोलोजिस्ट जालानले २४ भदौ २०७४ मा रुद्रकुमारी डिमेन्सिया रोगबाट प्रभावित भएकोले ‘एक्लै ठूलो निर्णय गर्न नसक्ने’ रिपोर्ट दिए भने कन्सल्ट्यान्ट कार्डियोलोजिस्ट भट्टले ३० भदौ २०७४ मा श्रीजंग उमेर ढल्केपछि लाग्ने डिमेन्सियाबाट प्रभावित भएको भन्दै औषधि समेत सिफारिश गरेका छन् (हे.रिपोर्ट) । दुवै मेडिकल रिपोर्टबारे शाह दम्पतीलाई सुईंको सम्म थिएन । अर्थात्, नर्भिक अस्पतालका दुई जना कन्सल्ट्यान्ट डाक्टरले बिरामी भनिएका व्यक्तिहरूको मुखै नहेरी मेडिकल रिपोर्ट बनाए ।
आफू डिमेन्सियाबाट पीडित भएको सूचना काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पाएपछि श्रीजंग शाह स्वास्थ्य जाँच गराउन वीर अस्पताल पुगे । वीरका एमडीजीपी सुशीलकुमार शाक्यले स्वास्थ्य जाँच गरेर जारी गरेको मेडिकल रिपोर्टमा शाह ‘शारीरिक र मानसिक दुवै रूपमा स्वस्थ’ रहेको उल्लेख छ । (हे.रिपोर्ट)
बाबुआमाले अस्पताललाई जग्गा दान दिन लागेको थाहा पाएपछि छोरी ईश्वरी राणाले २९ असोज २०७४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा ‘जग्गा रोक्का गरिपाऊँ’ भन्दै निवेदन दिइन् । त्यसक्रममा उनले आफ्ना बाबुको मुटुको चाल ३५ देखि ५० प्रतिशत रहेको, सम्झनाशक्ति क्षीण हुँदै गएको र आमालाई अल्जाइमर, डिमेन्सियालगायतका समस्या भएको जनाइन् (हे.निवेदन) । त्यो पुष्टि गर्न उनले नर्भिकका दुई डाक्टरलाई प्रयोग गरिन् ।
काउन्सिलले सोध्यो स्पष्टीकरण
शाह दम्पतीले नर्भिकका डा. जालान र डा. भट्टले आफूहरूको स्वास्थ्य परीक्षण नै नगरी ‘झूटो प्रतिवेदन’ तयार पारेको उजुरी ६ फागुन २०७४ मा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दिए (हे.निवेदन) । निवेदनमा भनिएको छ– ‘हाम्रो स्वीकृति र जानकारी विना अन्य व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएको तथ्य हामीलाई हालसालै थाहा हुन आएकाले सोको प्रतिलिपिसहित यो उजुरी निवेदन लिई उपस्थित भएका छौं ।’
शाह दम्पतीले यसबाट आफूहरूको संवैधानिक र मानवअधिकार उल्लंघन भएको भन्दै कारबाहीको माग गरेका छन् । उजुरीपछि काउन्सिलले डा. जालानलाई काउन्सिलमा उपस्थित हुन पत्र काट्यो । त्यस्तै, डा. भट्टलाई मौखिक स्पष्टीकरण सोधेको छ । काउन्सिलको इथिकल कमिटीका संयोजक डा. ढुण्डी पौडेलका अनुसार, स्पष्टीकरणको जवाफमा डा. जालानले छोरीले भनेर रुद्रकुमारीको मेडिकल रिपोर्ट तयार पारेको स्वीकारेका छन् । त्यस्तै, डा. भट्टले यो घटनामा आफ्नो कुनै दोष नभएको जवाफ दिएको संयोजक डा. पौडेलले बताए ।
यसबारे हिमालखबर ले जिज्ञासा राख्दा डा. भट्टले श्रीजंग शाहको मेडिकल रिपोर्ट बनाउँदा उनी उपस्थित भए/नभएको बारे आफूलाई सम्झना नभएको बताए । “छोरीले बाबुलाई उपचार गराउन बेलाबेलामा अस्पताल ल्याइरहन्थिन्” उनले भने, “त्यो दिन एक्लै आइन् कि बाबुलाई पनि ल्याइन् सम्झना भएन ।”